Nanangana Sendika Mahaleotena Vaovao Ny Rosiana Mpanao Gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Marsa 2016 4:42 GMT
Mpikambana mpanorina ny sendika vaovao mahaleotenan'ny mpanao gazety ao Rosia. Sary avy amin'i Pyotr Verzilov ao amin'ny Twitter.
Nanangana sendika ara-barotra mahaleotena voalohany ho fampiroboroboana ny firaisankinan'ny mitovy asa sy hanolorana fanohanana bebe kokoa ho an'ireo mpanangom-baovao miasa ao amin'ny firenena ny Rosiana mpanao gazety. Nipongatra ny sendika ho setrin'ny fitomboan'ny fanamby atrehin'ny mpanao gazety eto amin'ny lafiny fiarovana sy fameperana manoloana ny fahazoam-baovao.
Ireo mpanorina ny sendika dia ahitana mpanao gazety avy amin'ny Slon Magazine, Mediazona, Znak.com, RBC ary Novaya Gazeta, ankoatra ny hafa. Mediazona no ho ampiasaina ho tobin'ny andrim-pikambanana.
Vao nifidy ny hanangana sendika ny mpanao gazety tamin'ny fivoriana fananganana azy tao Moskoa
Fotoana manan-tantara: nifidy ny hananganana azy ireo mpandray anjara amin'ny fivoriana fananganana ny sendikan'ny mpanao gazety. Tsy nisy nitsipaka!
Efa elaela ihany no nihevaheva tany ambadika tany ny hevitra hananganana sendika mahaleotena iray, fa nahazo tosika taorian'ny fanafihana natao tamin'ny vondrona mpanao gazety sy mpiaro ny zon'olombelona teo amin'ny sisintany mampisaraka an'i Chechnya sy i Ingushetiya tao Rosia tamin'ny 9 marsa. Teny am-pandehanana ny fiara antonontolony nitondra ity vondrona ity no notafihan'andian-dehilahy mpiteny Tsetsenina [Chechen] izay nidaroka ireo mpanangom-baovao sy mpikatroka sy namotika ny fitaovany sasantsasany, nandoro ilay fiara antonontonony. Nolazain'ny manampahefanan'i Kremlin ho “asan-jiolahimboto tanteraka” ny fanafihana ary eo am-panaovana famotorana ankehitriny ny mpampihatra lalàna.
27 ny isan'ny olona nanatrika ny fivoriana fananganana ny sendika tamin'ny 20 marsa (ahitana mpanangom-baovao, tonia ary mpanao gazety mahaleotena), ary tamin'izany ihany koa no nananganana ny satan'ny fikambanana, araka ny nolazain'ny mpanangom-baovao iray miaraka amin'ny Yod News, izay nanatrika ny fotoana.
Nitatitra ny gazetiboky Slon fa hiasa amin'ny sehatra maro ity sendika vaovao ity, ka samy hiezana amin'ny sehatra tsirairay, tahaka ny gazety sy ny dokambarotra, fifandraisana amin'ny fikambanana vaventy iraisampirenena sy amin'ny sendika, fifandraisana amin'ny governemanta, fifandraisana eo amin'ny samy mpikambana, zo arak'asa, zon'olombelona ary fanangonana tahirim-bola, ny mpikambana isan-karazany ao aminy. Ny fivoriambe voalohan'ny sendika dia hotontosaina ao anatin'ny telovolana.
Ny endrikao rehefa nanangana sendikan'ny mpanao gazety ianao